Damacii Raila ku raadinayey Madaxeynanimda Kenya oo soo idlaaday! W/Q: Diraac Fagaase – Puntland Post
Posted on August 12, 2017 August 12, 2017 by Liban Yusuf
Kenya waxay taariikh u leedahay khilaaf dhanka doorashada, laga soo biloobo markii dalku qaatay nidaamka xisbiyada badan bilowgii 1991-dii, waxaana ilaa xiligaa dalka ka qabsoomay lix doorasho oo ay u tartamayeen in ay ku hantaan xukunka dalka Odinga Odinga oo wiilkiisa Raila Odinga.
08, Agust, 2017- Doorashadaan waxaa aad loo saadalinayey in xisbigaan talada haya ee Jubilee uu dib u soo noqonayo qiimo kasta oo ay ugu kacayso, waxaana jira heshiis ay wada galeen Wiliam Ruto iyo Uhur Kenyatta kaas dhigaya in Uhuru lagu taageero qabashada xilka labo jeer oo sharciga dalku ogolyahay. halka marka sadexaad la soo sharaxayo Wiliam Ruto, waxaa arinkaas u gogol xaaray in qaab farsamaysan doorashada loo galo oo xataa hadii la dhaco aan la fahmi karin madaama u yahay qaab electoronic ah. Waxaa sidoo kale meesha ka muuqatay in Jubilee ku guulaysteen inay beesha caalamka oo korjoogto ka ahayd doorashada ay ku qanciyaan in doorashadan si xalaal ah u dhacday.
Qore:- Diraac Fagaase